Achịcha Spaghetti - Ezi Ntụziaka
osikapa uzommeputa na ude nke ero ofe
eme ngwa ngwa ite na ewepu nsogbu
esi mee ka mkpụrụ osisi salad ọhụrụ dị ogologo
mkpụrụ osisi salad na piich achịcha ndochi na Them pudding
manicotti na chiiz ulo na ricotta
Achịcha Spaghetti bụ nri zuru oke maka nwata na-eri nri abalị na abalị ma ọ bụ iji jeere otu ndị ọbịa agụụ. Ntụziaka a nke spaghetti achịcha na-adọta akụkụ niile kachasị mma nke nkasi obi Italian - pasta - cheese, zesty meat sauce, na cheese ọzọ!
Ije Ozi na a akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ salad ebugharị ya Uwe ejiji vinaigrette Italian na ogbe achịcha ọkụ achịcha galik . E kwuwerị, ọ bụrụ na ọ bụ spaghetti pie, ọ bụ ihe efu na ihe ọ bụla bụ isi!
esi uzuoku beets na ngwa ndakwa nri
Spaghetti achịcha Efrata Prep
Spaghetti pie bụ kpọmkwem ihe ọ na-ada. Akara nke spaghetti & cheese tinyere ọkacha mmasị anyị Achịcha Spaghetti n'ụlọ na chiiz ọzọ. A na-eme ihe niile ruo mgbe ọ na-afụ ụfụ wee kewaa ya dị ka achịcha.
Kedu ihe dị na Spaghetti Pie? A na-edozi Spaghetti pie casserole na flavors na-echetara m lasagna (mana echere m na ọ dị mfe ịkwadebe).
A na-eji “ahịhịa” eme ihe nke noodles agwakọtara na àkwá na chiiz.
Àkwá ahụ na-ekekọta ihe niile ọnụ ka i wee nwee ike ibelata achịcha spaghetti gị n’ime wedges.
Anyị na-eji spaghetti mana pasta ọ bụla ga-arụ ọrụ na nhazi a.
Ntụziaka a na-eji nsụgharị nke ọkacha mmasị m pasta ihendori uzommeputa .
Ghichaa ihendori ka o sie ike.
Enwere ike ịtinye na veggies dị ka ose ede, ero na zukini.
A ricotta oyi akwa na-eme ka a Ntụziaka creamy. Gbakwunye ahihia ahihia gi na oyibo a.
You nwere ike iji obere chiiz n'ụlọ n'ọnọdụ ricotta. Chiiz ụlọ nwere ntakịrị mmiri mmiri ka ị wee nwee ike ịmịpụ ya ntakịrị.
Ọ bụrụ na ị nọ na tuo, enwere ike ịme nhazi a na-enweghị akwa ricotta.
esi edozi ike ọgwụgwụ gị na lemọn
Otu esi eme achicha Spaghetti
Ihe m kacha hụ n'anya gbasara usoro ntụ ọka a spaghetti bụ na ọ bụ ezigbo nri abalị na-adịghị mma nwere ike ịdị njikere na oge. Ọ ga-anọ na friji ruo ụbọchị ole na ole n'ime ya.
Esi nri spaghetti noodles al dente (ha ga-esi nrikwu na oven) ma jiri akwa na chiiz gwunye ha. Pịa n'ime efere miri emi.
Brown beef na nwuo na onyinye onyinye (ma ọ bụ marinara ihendori ) na tomato. Simmer ka thicken.
Ihe ndozi ricotta na anụ nri n’elu spaghetti noodles. Top na chiiz na akpọọ nkụ.
Mpempe Spaghetti achịcha
Enwere ike ịbunye ihe fọdụrụnụ n'ime ụbọchị 3-4. Reheat na microwave ma ọ bụ oven ruo mgbe ọkụ (oge ga-adịgasị iche dabere na oke nha).
Enwere ike ịhapụ ihe fọdụrụ na otu akụkụ maka nri ehihie. Mee oyi n'abalị na ngwa nju oyi na ngwa ndakwa nri ruo mgbe iwe dị ọkụ.
Iji Kwadebe Tupu Oge: A na-eme achịcha Spaghetti achịcha dị ka nri na-aga n’ihu maka friza. Naanị kwadebe ya dị ka akọwara ebe a, mana akpọrọ akpọ. Kama, gbapụta ya na friza. Mgbe oyi na-atụ, wepụ ya na efere ma nyefee ya na nnukwu, baggie plastic. Ma ọ bụ, kpoo ya na pan a na-ekpofu mmiri iji mee ka ọ dị ọcha na inye onyinye dị mfe.
Ọ nwere ike ịga site na friza na oven. Gbakwunye nkeji 30-45 nye oge nri. A na-anabata nri abalị na ụtọ, a na-anabata spaghetti achịcha mgbe niile na tebụl!
gịnị bụ ọkara otu ụzọ n'ụzọ atọ
More ọkacha mmasị Spaghetti
Spaghetti carbonara - talọ oriri na ọ qualityụtaụ dị mma n'ụlọ
Achịcha Spaghetti n'ụlọ - ọkacha mmasị m!
Arụ n’ụlọ Chicken Spaghetti - ya mere flavorful
Spaghetti Nde Nde
Siri Spaghetti - a kpochapụwo
4.97site na26votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe30 Nkeji Oge nri30 Nkeji Oge zuru ezu1 aka elekere Ọrụ6 servings Onye edemedeHolly Nilsson Ntụziaka a nke spaghetti achịcha na-adọta akụkụ niile kachasị mma nke kpochapụwo Italiantali - pasta - cheese, meat sauce, na cheese ọzọ! Bipute Ntụtụ
▢1 iko mozzarella chiiz
Spaghetti jikọrọ ọnụ
▢6 ounce spaghetti
▢½ iko parmesan chiiz
▢1 iko chiiz ricotta
▢abụọ tablespoons pasili
▢½ ngaji basil a mịrị amị ma ọ bụ 1 tablespoon ọhụrụ
▢1 paụnd Anụ ehi akwọrọ akwọ
▢½ obere yabasị okpokoro
▢14 ounce tomato dice, kpochapu
▢abụọ iko onyinye onyinye
Esi nri spaghetti na igbapu. Kpoo na butter. Nwuo na àkwá na cheese parmesan.
Tinye spaghetti na efere miri emi nke miri emi. Pịa ka etolite jikọrọ ọnụ.
Ikpokọta ricotta cheese, pasili na basil. Gbasaa ngwakọta na spaghetti.
Brown beef na yabasị ruo mgbe ọ pink ga-anọgide. Igbapu abụba ọ bụla. Tinye tomato na pasta ihendori. Simmer 10 nkeji ma ọ bụ ruo mgbe thickened. Gbasaa chiiz ricotta.
Ime minit 20-25. Top na mozzarella ma mee ihe mgbakwunye nkeji 5 ma ọ bụ ruo mgbe agbazere chiiz. Jụụ 10 nkeji tupu ị na-eje ozi.
Calorisị:Ogbe 428,Carbohydrates:31g,Protein:37g,Abụba:17g,Abụba Ajuju:9g,Cholesterol:Ogbe 141mg,Sodium:849mg,Potassium:Ogbe 831mg,Eriri:3g,Sugar:6g,Vitamin A:1075IU,Vitamin C:14.4mg,Calcium:Ogbe 421mg,Iron:4.3mg
Isiokwuachịcha spaghetti N'ezieIsi N'ezie Esie yaAmerịka, ItaliantalianEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .